စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/03/2020)
Noravank သည်သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထင်ကရဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ကိုသာ Vayots Dzor ပြည်နယ်. အသင်းတော်ကဝိုင်းနှင့်အတူချွန်ထက်အနီရောင်ကျောက်တုံး, ပြီးနောက် အံ့သြဖွယ်ရှုခင်း သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက် စူးစမ်းယား. သမိုင်း Noravank အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့ အဆိုပါ 13ကြိမ်မြောက် ရာစုနှင့်နည်းလမ်းများ "အသစ်ဘုန်းကြီးကျောင်း" အတွက်အန်. ဘုန်းကြီးကျောင်းအလာယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပညာရေးစင်တာအနီးယား.
Tatev တ၏ရတနာအန်ဗိသုကာ. အဆိုပါဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ထဲမှာ ၉-၁၃ ရာစုကအနေနဲ့ပညာရေးစင်တာနှင့်သမိုင်းအတွက်အရေးပါယားသမိုင်း. ၏နာမတော်ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့မူလ. အဲသည်အကောင်းနှင့်အ touchy ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းခင်သူထောင်ဘုရား. သူကစိတ်အားထက်သန်မြင်ရသူ၏လက်မှအလိုရှိသည်တို့ကိုမေးပေးသနားရန်ဘုရားသခင်သူ့ကိုအတောင်တော်.
Sagrada Familia အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်အထင်ကရအသင်းတော်တွင်စပိန်. ဆောက်လုပ်ရေး၏အထိမ်းအဖြစ 1882. တစ်ဦးဂန္ Gothic အဘိဓါန်စတိုင်ဒီဇိုင်းဗိသုကာ Francisco ကက de Paula del Villar. ဒါပေမဲ့, တွင် 1883 Antoni Gaudi ကပြောင်းလဲစီမံကိန်းနှင့်တည်ဆောက် ခေတ်သစ်ဗိသုကာ သောကမ္ဘာအတွက်အကျော်ကြား. ဆောက်လုပ်ရေးနိုင်မည်တွင်ပြီးစီး 2026, အရာစုနှစ်၏Antoni Gaudi ရဲ့သေခြင်း.
အဆိုပါဗိသုဖို့စီစဉ်တည်ဆောက် 12 တာဝါတိုင်, အနုသည်ယေရှုခရစ်နှင့်တပည့်, တဦးတည်းမှယေရှု၏အမိ၏, လေးအားလုံးက. ယခု, ပြီးစီးခဲ့ပါပြီပြီးတာဝါတိုင်ရှစ်. အတွင်းအသင်းတော်, Gaudi ဇိုင်းအတွက်ကော်လံတစ်ဦး၏အသွင်သဏ္ဌာန်၏သစ်ပင်စည်သောစေတောစတိုင်. ထိပ်ကနေဗိမာန်, သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သ အထင်အမြင်ချင်း မြို့သူမြို့သား.
ထမ်းဘိုးဘုရား အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်ထင်ကရအဆောက်အတွက်နော်. ဒါဟာတည်ဆောက်အတွက် 1180 နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့အဘိုးအနြေ္ဒ. ဤအမျိုးအစားအသင်းတော်များမှာအရေးအပါဆုံးအထင်ကရထိမ်းအနာ္ေဗိသုကာ. အချို့၎င်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဂုဏ်အလာႏိုင္ပါထွင်းထုမုခ်နှင့်စည်းမျဉ်းနှင့် carvings၏နဂါးရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ် အိမ်ခေါင်မိုး. ဒီစတိုင်ခဲ့ပြန့်ပွားအတွက်အတတ်ပညာအတွက်အသုံးပြုလည်းဗြိတိန်.
အဆိုပါဧရိယာအဝိုင်းနှင့်အတူကြွယ်ဝသောသမိုင်းဝင်အမွေ. Vindhellavegen ပီးအနီးတည်ရှိသောခရစ်ယာန်အကြံပြုလွလမ်းလျှောက်ဖြစ်နိုင်ခြေ. ဤသမိုင်းဝင်လမ္း ချီးမြှင့်ခဲ့သည် "ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ့အလှဆုံးလမ်းကြောင်း" အနော်များပြည်သူလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် 2014.
Duomo ေယမြောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများလန်, ဒီအဆုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအဆောက်အဦကမ္ဘာထဲမှာ. ထာဝရဘုရား၏လန်ဆန္ဒဆောက်လုပ်ဖို့ထူးခြားသောဘုရားစေမယ်လို့လူမျိုးခံစားရသောဘုန်းအသရေ၏ဘုရားသခင်နှင့်မြို့ဆက်သွယ်. အား Duomo ပါဝင်ပတ်သက်ပုံစံတစ်မျိုး, ္, ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေနှံ့ကနေဥရောပ. အသီးအသီးအလုပ်သမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်လုံ့ကူညီဖန်တီးရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ် Duomo.
Hallgrimskirkja ဘုရားကျောင်း အမြင့်ဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးအဆောက်အဦအစျနှင့်မြင်နိုင်မြို့တော်ကိုတလျှောက်လုံး. အသင်းတော်ရှိ 74,5 မီတာ ႏွင့္ ခရီးသွားဧည့် နိုင်ဝင်အသင်းတော်ကိုခံစားခြင်းအထိမ်းအမြင်. အဆောက်အဦရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ရန်အတွက် 1945 ပြီးစီးတွင် 1986. အဒန်သင်းတော်အကြီးအလားတူအချော်ချော်ရည်စီးဆင်းသည့်အခါချော်ရည်အေးသို့ကျောက်.
လမ်းကြောင်းတွေအဝေးမှထံမှလေးလက်စွဲနှင့်စက်ဘီးနင်း. ရှိပါတယ် 102 ရာထူး, 72 ရပ်တန့်, နှင့် 5275 ပိုက်ပြီး 15 မီတာ အရပ်ရှည်ရှည်, အလေးချိန်ကျော် 25 တန်ချိန်. အဆိုပါအဆောက်အစွမ်းထက်နိုင်စွမ်းနှင့်ဖြည့်စွက်၏သန့်ရှင်းသောနှင့်ကြီးမားသောအာကာသ. ေဆာက္လုပ္ေရးကလီစာတွေကို၏အကြီးအချောအတွက် 1992 သုံးပြုခဲ့သည်အမျိုးမျိုးများအတွက်အသံသွင်း.